Zimbabwean President Robert Mugabe smiles during a youth rally in Marondera, east of Harare. The wealth of Zimbabwe’s former longtime president Robert Mugabe was long a mystery. Now the first official list of assets to be made public says he left behind $10 million and several houses when he died in September, 2019. Some in Zimbabwe view that estate as far too modest for Mugabe, who ruled for 37 years and was accused by critics of accumulating vast riches and presiding over grand corruption.
Some in Zimbabwe view that estate as far too modest for Mugabe, who ruled for 37 years and was accused by critics of accumulating vast riches and presiding over grand corruption. The report by the state-run Herald newspaper on Tuesday does not mention any overseas assets, though it is thought that Mugabe had properties in neighboring South Africa and in Asia.
More than a dozen farms are publicly known to have been seized from both black and white farmers by the late strongman’s family. Mugabe died of cancer in a Singapore hospital at age 95 nearly two years after he was forced by Zimbabwe’s military and ruling party to resign.